Fomba Google dimy tsy mitovy ary inona no lazain'ny mpampiasa azy momba ny typografia | Famoronana an-tserasera
Marina izany Google Fonts manao ny zavatra ananany rehefa mila mahasarika mpampiasa miaraka amina endrits samy hafa izy, saingy amin'ity indray mitoraka ity dia manao pirinty mahaliana sy mahafinaritra izay tian'ny rehetra izy, na dia ny tena marina aza dia ny ankamaroan'ny endritsoratra ananany dia miovaova ary indraindray sarotra ny mahita zavatra mendrika eo amin'ny karazany maro.
Amin'ity fanangonana ity dia manao ny asa ho anao izahay ary manolotra anao ny anay Endritsoratra ankafiziko 5 avy amin'ny Google Fonts, Sahia hahalala raha mitovy hevitra aminao izahay.
1 Faritra manodidina ny endri-tsoratra
2 Elite manokana
Faritra manodidina ny endri-tsoratra
Karazan-tsoratra ampiasaina amin'ny sora-baventy, miaraka amin'ny tena mahay mamorona. Ny tsipika tsy ara-dalàna izay miovaova ny hatevin'ny tsirairay amin'izy ireo, manome rivotra hafa sy hafa tany am-boalohany, tonga lafatra amin'ny fanasongadinana hafatra amin'ny afisy na amin'ny lohatenin'ny tranonkala iray.
Ny tantara momba an'ity typeface malaza ity dia aingam-panahy ho an'i Barrio izay avy amin'ny varavarankelin'ny magazay, ny varavarankelin'ny magazay, ny sakafo masaka ao an-trano, ny mpivaro-kena ary ny mpivarotra ambongadiny ary ny tolo-tanana natolotry ny mpivaro-tena. Ny mpamorona azy dia i Sergio Jiménez sy i Pablo Cosgaya.
Izy io dia foto-kevitra miaraka amin'ny fomban'ny milina fanoratana. Amin'izany fomba izany dia toa mivoaka amin'ny lakilen'ny tsirairay ny toetrany tsirairay avy, manome azy a rivotra taloha ary amin'ny fotoana maoderina.
Avy amin'izany dia sarotra be ny mahita ny tantaran'ny namoronana azy sy momba ny aingam-panahin'ny mpanoratra, saingy zavatra iray izay tena miabo tsara tsy azo faritana, dia ny fahitanao azy amin'ny tranonkala tsy misy olana
Karazan-tsoratra tahaka ny an'ny "Tanana tsy tapaka"Satria fantatro miasa amin'ny volana Meyúkirany.
Miaraka amin'ny rivotra mamorona sy tsy misy ahiahy tonga lafatra ho an'ny láahy na hisarika ny sainaón amin'ny fotoana iray ao amin'ny vavahadin-tranonkala ary ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny tarehin-tsoratra no mahatonga azy io ho mavitrika be. Bahiana dia endritsoratra maimaimpoana noforonin'i Pablo Cosgaya sy Dani Rascovsky tamin'ny 2013.
Ny firafiny dia mety indrindra amin'ny lohateny voafintina sy lahatsoratra fohy, manome glyph 490 izy ary ny programa OpenType dia manakana ny famerenana famantarana rehefa manoratra. Manohana fiteny mihoatra ny 100!
Amin'ity tranga ity dia miatrika typeface misy rivotra an-jaza isika, izay mahatonga azy io ho tonga lafatra amin'ny sehatra rehetra mifandraika amin'ity lohahevitra ity.
Na izany aza, ny maha-zaza dia tsy manaisotra ny maha-zava-dehibe na ny halalin'ny hafatra ezahin'ny tantaram-pitiavan'i Kranky hambara, na ahoana na ahoana, tsy natao ho an'ity faritra ity fotsiny izy io, fa ny fomban-tànany no mahatonga azy ho be mpampiasa.
Ity angamba ny fahatsapanaónmás mitovy amin'ny hafa izay efa noresahintsika tato amin'ity lahatsoratra ity ary mety tsara amin'ny fomba "soratra”Izay mitohy fironana amin'ny taona 2017. Amin'ity fomba ity dia safidy tsara ho an'ny tranonkala io, satria olona marobe tokoa no mandalo ireny fotoana nanoratana sy nahazoana aingam-panahy ireny
Ho famaranana, dia ho tsapantsika fa mahafinaritra tokoa ny manome azy ireo mikasika manokana sy miavaka amin'ny lahatsoratray.
Izy io dia manana fianakaviana endri-tsoratra miisa 600 mahery ary izy ireo dia mety amin'ny famakiana amin'ny takelaka bilaogy sy ny pejin-tranonkala amin'ny ankapobeny, loharano loharano misokatra izay apetrak'i Google eo am-pelatanantsika, ary eny an-tanan'ny ankamaroany dia ataovy hoe:ñadores gráficos sy bilaogera.
Taona maro lasa izay dia tsy azo atao izany, satria tsy maintsy mametra ny tenany amin'ny endritsoratra default toa azy ireo izy ireo Arial, Times New Roman, Georgia na Comic Sans. Tena mora ampiasaina izy ireo, satria azonao atao ny misintona azy ireo amin'ny solosanao na manafatra azy ireo mivantana avy amin'ny pejy lehibe an'ny Google Fonts. Ny zava-drehetra dia resaka tsiron'ny mpampiasa manokana!
Aza mino fa ny dingana amin'ny fisafidianana ny endritsoratraía Tsotra izany, satria eo amin'ny be dia be dia mety ho fanamby ho an'ny rehetra izany, saingy na izany aza, misy toetra iray izay iraisan'izy rehetra, ary ny fikatsahana hampita hevitra na handefasana hafatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Google Font dimy hafa sy izay eritreretin'ireo mpampiasa azy momba ny typeface
Pablo Cosgaya dia hoy izy:
Ry Jorge malala:
Misaotra anao nampiditra an'i Bahiana sy Barrio tao amin'ny lahatsoratranao. Araraoty ity fotoana ahafahana mizara vaovao ity: afaka mankafy kinova vaovao amin'ny endritsoratra roa ianao izao, miaraka amin'ny ambany kokoa. Toy ny mahazatra, manana alalana amin'ny fampiasana maimaimpoana sy malalaka, na dia amin'ny tetikasa ara-barotra aza. Azonao atao ny misintona azy ireo eto: goo.gl/0aIFF1
Valiny tamin'i Pablo Cosgaya
Inona no vaovao ao amin'ny Google Fonts: afaka manambatra endritsoratra ao anaty antontan-taratasinao ianao izao!